GW KUCHENESA MAPETA MAPAINI MAZUVA SHEETER D150 / D170 / D190
GW-D akateedzana mapatya banga sheeter anotora epamberi dhizaini remapatya rotary banga ma cylinders ayo anotyairwa zvakananga neakakwira simba AC servo mota nekukwirira kwakaringana uye akachena akachekwa. GW-D yaishandiswa zvakanyanya kucheka bhodhi, kraft bepa, Al laminating bepa, simbi bepa, hunyanzvi bepa, duplex zvichingodaro kusvika 1000gsm.
1.19 ″ uye 10.4 ″ hunyambiri hwekubata sikirini pakucheka unit uye dhiraivhu yemajoni control anoshandiswa kumisikidza uye kuratidza saizi saizi, kuverenga, kucheka kumhanya, kuendesa kunoenderana, nezvimwe. Iyo yekubata skrini yekudzivirira inoshanda pamwe chete neNokia Siemens.
2.The TWIN Knife yekucheka unit ine synchronic rotary yekucheka banga kunge chigero pane izvo zvinhu kugadzira kutsetseka uye kwakaringana kucheka kwepepa kubva ku150gsm uye kusvika ku1000gsm.
Rumwe ruzivo rwechigadzirwa
Zvinoenderana nehunyanzvi hweGW chigadzirwa, Muchina uyu unonyanya kushandiswa kupepa mapepa muPepa Mill, Printing House nezvimwewo, kunyanya maitiro anosanganisira: Kusunungura - Kucheka - Kutaridza - Kuunganidza,.
1.19 "uye 10.4" maviri ekubata skrini pane yekucheka yuniti uye dhirivhari yuniti maitirwo anoshandiswa kuseta uye kuratidza saizi saizi, kuverenga, kudimbura kumhanya, kuwirirana, uye nezvimwe. Iyo yekubata skrini yekudzivirira inoshanda pamwe chete neNokia Siemens.
2.Iyo yakakwira-inomhanya bhandi inotyairwa neBritish CT yakakwira-simba servo kuverengera yakatsetseka bepa kuburitsa.Iyo pneumatic marara ejecting chimiro bvisa tsvina mapepa uye inovandudza iko nyore kwekushanda. Iyo gasi chitubu bhandi kukakavara kifaa inovimbisa kuti bhandi rega rega rinogona kumhanya zvakanaka.
3.The TWIN Knife yekucheka unit ine synchronic rotary yekucheka banga kunge chigero pane izvo zvinhu kugadzira yakatsetseka uye yakajeka kucheka bepa kubva ku150gsm uye kusvika ku1000gsm. Banga banga uye pepa rinodhonza roller zvakasarudzika zvinotungamirwa ne2 CT yakakwira simba servo servo kubva kuUK, gamuchira isina-giya chimiro dhizaini, uye neGW's 5 axis yakanyanya kurongeka CNC kumuchina main stand mune chimwe chidimbu. kunyatso bvisa kupaza kwekuzungunuka kwemapanga maviri, kuve nechokwadi chehupenyu hwejira uye kucheka kururamisa. iyo inovimbisa kudzikama kwechombo chemuviri panguva yekumhanya-mhanya mashandiro.
4.Three seti inorema basa pneumatic slitters simbisa yakagadzikana uye yakachena slitting. Magetsi anotyairwa otomatiki ekucheka upamhi kugadzirisa. (* Sarudzo).
5.Dual shaftless kumashure inomira newebhu tension chidhiraivho uye pneumatic mabhureki mayuniti akaenzana.
6. Zvinobudirira kuwedzera hupenyu hwebasa remuchina.
Main technical Paramende
Muenzaniso GW D150 / D170 / D190
Mhando yekucheka Twin banga, Top chipande uye pasi reza muhombe nokuveza
Pepa kurema renji 150-1000 GSM
Reel mira kutakura chinzvimbo: 2 matani
Reel dhayamita Max 1800mm (71 ")
Kucheka Upamhi Max 1500/1700 / 1900mm (66.9 ")
Cheka kureba renji Min. 400-Max. 700 mm
Numeri. ye rolls yekucheka 2 mipumburu
Kucheka kunyatso ± 0.15mm
Max. Kukurumidza kwekucheka 400cuts / min
Max. Kucheka kumhanya 300m / min
Dhirivhari kureba 1700mm (incl.pallet)
Voltage AC380V / 220Vx50Hz 3ph
Main mota simba: 64kw
Simba rese 98kw
Kubuda Chaicho chinobuda chinoenderana nezvinhu, uye huremu hwepepa, uye kurudyi mashandiro maitiro
1. Dual chinzvimbo shaftless pivoting ruoko kusunungura kumira
2. Mhepo inotonhora pneumatic disc brake
3. Kunetsekana otomatiki kunoenderana nereel dhayamita
4. Servo inodzorwa decurler system
5. EPC webhu inotungamira
6. Twin helical banga sepombi
7. Maseti matatu ePneumatic Slitters
8. Anti-Static Bhawa
9. Kunze kwekudya uye chikamu chinopindirana
10. Hydraulic kuendesa unit 1700mm
11. Auto kuverenga uye tapira inserter
12. Dual kubatwa chidzitiro
13. JIJIN PLC, UK CT Servo Mutyairi, Schneider inverter, kupinza zvigadzirwa zvemagetsi
14. Kurasa gedhi
Dual chinzvimbo shaftless pivoting ruoko kusunungura kumira ne-mu-pasi track uye trolley system.
Mhepo yakanyorova pneumatic inodzorwa disc mabhureki paruoko rumwe nerumwe.
3. Auto kunetsekana kunoenderana reel dhayamita
Auto tension controller inozvipa iwe wakanaka kutonga pane kunetsekana kunyanya kune diki reel.
4. EPC kutungamira kwewebhu
EPC sensor pamwe neyakaimiririra "swing furemu" inobvumidza yakaderera pamucheto trim yewebhu, uye yakasimba kudzora kwewebhu kumucheto mukati meiri reel kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
5. Servo inodzorwa decurler system
Servo inodzorwa decurler sisitimu inogona otomatiki kuona hupamhi hwepepa uye kugadzirisa simba rinodzokororwa, iyo coefficient inogona zvakare kuiswa neakasiyana zvinhu gsm, uye simba rekudzokororazve rinoteedzera yakatarwa zvinhu uye dhayamita.
6. Twin Knife inotyairwa neservo mota
a. Mapatya helical banga rinovimbisa rakapinza uye rakachena rekucheka kumucheto nekukwirira kwakaringana
b. banga iri rakagadzirwa neakakosha chiwanikwa st eel SKH.
Heavy basa pneumatic slitters chengetedza kugadzikana uye kwakachena slitting.
a.Yakazara yakawiriraniswa kumhanya pakati pepamusoro kumhanya kubuda uye kuwirana tepi chikamu kuchengetedza shingle yakakodzera.
b.Ollapping unit ine inogadziriswa inopindirana kukosha uye jam-stop sensor. Imwe sheet sheet inobuda inogona kusetwa.
12. Nokia inobata skrini
Kureba kwekucheka, huwandu, kumhanyisa muchina, kumhanyisa kumhanyisa kunogona kuratidzwa uye kumisikidzwa kuburikidza nekubata skrini.
8. Anti-kunofambira mberi Bar
10. Hydraulic kuendesa unit
11. Auto kuverenga uye pombi yekuisa
13. Yega yakagadzirirwa PLC, Schneider inverter, CT Servo mota, FUJI servo mutyairi
2. Mechanical-ichiwedzera chuck
3. Otomatiki yekucheka upamhi kugadzirisa
4. Otomatiki nhovo shanduko
5. Dhirivhari yepamusoro bhandi
6. Isiri-yekumira stacker
7. Kuratidzira kwekutevera
8. Yakawandisa kuchengetedzwa kwekuchengetedza uye yekudyidzana chengetedzo sisitimu
2. Mechanical-kuwedzera chuck
4. otomatiki pallet shanduko
5.Delivery Yepamusoro Bhandi
8. Yakawandisa kuchengetedzwa kwekuchengetedza uye yekupindirana chengetedzo sisitimu
Magnetic chinja (2 waya)
Solid State ataure (40A)
Bhatani (pachako kukiya)
HAPANA yekutaurirana module
Servo mutyairi 0.4kw
Hydraulic kumanikidza detector switch
Servo mota (CT 18.5kw)
Servo mota (CT 64kw)
Servo mota (CT 7.5kw)
Centrifugal wepakati-kumanikidza blower (0.75kw, 2800rpm)
D150 Precision Twin Knife Sheeter Kurongeka
Kuburikidza nekubatana pamwe neepamusoro-soro mudiwa mupasi rose, Guowang Boka (GW) rine kambani Joint venture nekambani yeGerman uye KOMORI yepasi rose OEM chirongwa. Zvichienderana nehunyanzvi hweGerman neJapan hwetekinoroji uye anopfuura makore makumi maviri neshanu ruzivo, GW inoramba ichipa yakanakisa uye yepamusoro sisitimu-yekudhinda mhinduro.
GW inotora iyo yepamusoro gadziriso mhinduro uye 5S manejimendi standard, kubva kuR & D, kutenga, machining, kuungana uye kuongorora, maitiro ese anoteedzera epamusoro mwero.
GW inodyara yakawanda muCNC, kuendesa DMG, INNSE- BERADI, PAMA, STARRAG, TOSHIBA, OKUMA, MAZAK, MITSUBISHI nezvimwe kubva pasi rese. Chete nekuti unoteedzera mhando yemhando yepamusoro. Iyo yakasimba CNC timu ndeye yakasimba garandi yehunhu hwezvigadzirwa zvako. MuGW, iwe unonzwa iyo "yepamusoro inoshanda uye yakanyanya kunyatsoita"
Pashure: GW PRECISION SHEET CUTTER S140 / S170
Zvadaro: S-28E Matatu Mativi Anocheka Muchina WeBhuku Rakatemwa
Pepa Sheeting Machine
GW PRECISION SHEET CUTTER S140 / S170